Yaa'iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) waggoota 33 booda Finfinneetti eegale - BBC News Afaan Oromoo
Yaa'iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) 33ffaa Magaalaa Finfinneetti bakka hayyuulee fi qondaaltoonni motummaa olaanoo argamanitti Yunivarsiitii Rifti Vaaliitti eegale.
Dhaabbanni seenaa fi aadaa Oromoo qorachuuf hundaa'e kuni magaalaa Finfinneetti yaa'ii yeroo taa'u waggoota 33 keessatti kun kan duraati.
Yaa'ii kana irratti haasaa baninsaa kan taasisan pirezidantiin waldichaa Aadde Kuulanii Jaalataa ammaan dura seenaa dogoggoraa namoonni seenaa Itoophiyaa barreessaa fi himaa turan sirreessuu keessatti OSA qooda guddaa baheera jedhaniiru.
Pireezidantiin Itti - aanaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa kana irratti kan argaman yoo ta'u hojii dhabbati OSA'n hojjataa tureef galata argachuu qaba jedhaniiru.
''Osooma mortuun mortuu hortuun horti, iniifannoon Oromoo itti fufa!'' kan jedhan Obbo Shimallis, dhaloonni amma jiru duudhaa sirna gadaa abbootii isaa cimsatee akka deemuuf qo'annoo fi qorannoo taasisu cimsuu akka qabu dhaamaniiru.
Aaddee Kuulanii Jaalata pirezidaantiin waldichaa gama isaanitiin, OSA seenaa fi aadaa deebiisanii dagaagsuu qofa osoo hintaane dirqama 'roadmap' dhalootatti agarsiisuu qaba jedhan.
Yaa'ii guyyoota sadiif gaggeeffamu kana irratti hayyoonni Oromoo fi Prof Asmaroom Laggasaa dabalatee qorattoonni seenaa Oromoo fi jaallattoonni Oromoo hedduun biyya keessaa fi biyya alaa irraa hirmaataniiru.
Pirofeesar Baqalaa Guutamaa waraqaa qu'annoo mata dure 'Federalism and Identity' jedhu jalatti dhiyeessaniin, 'Itoophiyaan yeroo ammaatti sirrni federaalaa akka hojjatu taasisuun alatti fala biraa hinqabdu' jedhaniiru.
Mootummaan yeroo ammaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiru sirna Federaalizimii bu'uuressullee ofumaan naannolee olaantummaadhaan bulchaa waan tureef federaalizimii dirqamaan saboota walitti fide jedhamee komatama.
Biyya akka Itoophiyaa sab-daneessa taate kana keessatti Federaalizimiin saboota walitti fidu dirqama ta'uu kan dubbatan Pirofeesar Baqqaleen namoonni sirni federaalizimii qoodiinsa uuma, biyya diiga jedhan sirrii akka hin taane dubbatan.
Federaalizimii sabdaneessaa dhugaadhaan bu'uuressuuf sirni dimokiraasii jiraachuun dirqama kan jedhan hayyuun kuni paartii fi mootummaan adda ba'anii hojiisaanii hojjechuu dhabuun rakkoo hamaaf sirna kana saaxiluu dubbatan.
Sirna Federaalizimii sab-daneessaa hin hordoftu taanaan Itoophiyaan baay'inaa fi garaagarummaa Saboota keessa jiru hooggantee deemuun hin yaadamus jedhan.
Mirga dhuunfaa kabajuu fi mirga gareef beekamtii kennuun utubaa sirna federaalizimii ta'uu qabas jedhan.
Eenyummaa ofii qabatanii Itoophiyaa ta'anii jiraachuun utuu danda'amuu sabummaa kee gatii Itoophiyaa ta'i yaadi jedhu balaa sirna federaalizimiiti jedhan.
Furmaata rakkoo keetii anatu siif beekaa osoo hin taane hirmaachisuudhaan namni hunduu rakkoo isaaf qaama furmaataa akka ta'u haala mijeessuutu nu baasas jedhan.
Gama biraatiin mata duree 'Aangoo Diinagdee fi Siyaasaa mootummaa giddu galeessaan qabame' jedhurratti waraqaa qoranno kan dhiyeessan Dr. Ammayyuu Godessoo Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa kan ta'e mootummaan federaalaa aangoo mootummaa naannolee keessa seenuun sarbuu isaati jedhan.
Mootummoota naannoleef aangoo qooduu dhabuu, saboota hundaaf beekamtii kennuu dhabuu fi qoqqoodanii bulchuuf yaaluun sirna federaalizimii biyyattiirraan dhiibbaa ga'eera jedhan.
Ammas taanaan sirna hunda walqixa tajaajiluu fi ummata Itoophiyaa hundaaf ta'u fiduuf Paartileen Siyaasaa waliin mari'achuu akka qaban dhaamaniiru.
Hayyoonni lameen erga waraqaa qoranno dhiyeessanii booda gaaffilee ka'aniif deebii kennaniiru.
Gaaffilee ka'an keessaa mootummaan Itoophiyaa amma bulchaa jiru akkaataan dhufiinsa isaa gama humna waraanaatiini, akkamiin sirna dimokiraasii mariirratti hundaa'e bu'uuressuu danda'a jedhuuf paartileen siyaasaa Oromoo kanarratti dirqama akka qabantu himame.
Gaaffii walitti dhufanii sirna federaalizimii uumuun haala Itoophiyaan amma keessa jirtuun dhuguma furmaata ta'aa jedhuuf waldanda'uun dhimma ijoo ta'uutu himame.
''Lammiileen Itoophiyaa hunduu aadaa fi duudhaa, eenyummaa isaanii qabatanii walitti dhufanii waldanda'uudhaan waliin jiraachuu danda'u, yoo tokko balleesse, inni kaan danda'aa, akkasiin waliin jiraachuutu furmaata ta'a'' jedhan Pirofeesar Baqqaleen.
Moggaasa Oromoo, Obbo Galatoo; 'Ani Oromoo adiidha'
Ministirri dhimma alaa US Antoonii Biliinken MM Abiy Ahmad waliin mariyatan
2 Bitooteessa 2021
Injifannoon Aduwaa walaloofi walleen akkamiin yaadatama?
Jawaar Mohaammadfaa hospitaala dhuunfaa Laandimaark galan
Lubni 'ajjeechaa Aksuum' irratti maqaan dhahame kan sobaatii?
Mootummaan Itoophiyaa 'Ameerikaan dhimma keessoo kootti galuu hinqabdu' jedhe
BBCn hidhamuu gaazexeessaa isaatiin walqabatee yaaddoo qabu ibse
Obbo Jawaarfaan huuqqatanii, qaamni laafee mana murtiitti dhiyaatan
Doktora baqaqsee yaalaa wayita jirutti karaa Zoom'n mana murtii dhiyaate
Anjelinaa Joolii fakkii Winistan Charchiil kaase Birrii miiliyoona 400 olitti gurgurte
Qoccollaa saalaan kan himataman bulchaan Niiwu Yoork 'hojii gadhiisi' jedhaman